मकवानपुरको १० वटै स्थानीय तहमा कोरोना संक्रमित कति ? हेर्नुस पुरै विवरण - Khabar Break | Khabar Break
मकवानपुरको १० वटै स्थानीय तहमा कोरोना संक्रमित कति ? हेर्नुस पुरै विवरण
हेटौंडा । मकवानपुरमा कोरोना संक्रमितको संख्या तिब्र बढ्दै गएको देखिएको छ । आज पनि मकवानपुरमा ६१ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । मंगलबार बिहान १६ जना साँझ ४५ जना गरी ६१ जना पुगेको हो । यसअघि सोमबार मकवानपुरका ७१ जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो । हालसम्म मकवानपुरका एक हजार ८० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकामा ६ सय ३६ जना संक्रमण मुक्त भएका छन् ।
हाल जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या ४ सय ४४ रहेको छ । संक्रमितहरु आइसोलेसन र होम आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन् ।जिल्लामा कोरोनाको कारण हालसम्म १० जनाको मृत्यु भएको छ । जसमा ९ जना हेटौंडा उपमहानगरपालिका रहेका छन् भने एक जना मनहरी गाउँपालिकाका रहेका छन् ।
जिल्लामा सबैभन्दा बढी संक्रमण पुष्टि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका रहेका भने सबैभन्दा थोरै ईन्द्रसरोबर गाउँपालिकाका रहेका छन् ।
यस्तो छ जिल्लाको १० वटा स्थानीय तहको संक्रमणको अवस्थाबारे खबरब्रेकले तयार पारेको रिपोर्टः
मकवानपुरमा हालसम्म सबैभन्दा बढी संक्रमण पुष्टि हुनेमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका रहेको छ । हेटौंडामा हालसम्म ६ सय ८४ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हेटौंडाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक भोला चौलागाईले खबरब्रेकलाई बताए । हेटौंडाका हालसम्म पुष्टि भएकामा करिब ६० प्रतिशत संक्रमित संक्रमण मुक्त भईसकेको बताईएको छ । हेटौंडामा रहेको दुई आइसोलेसनमा हाल १ सय ४ संक्रमित उपचाररत रहेका छन् । हेटौंडाको गौरीटार आइसोलेससनमा आजको दिनमा १ सय १ जना संक्रमित र कर्रा आइसोलेसनमा ३ संक्रमित गरी १ सय ४ संक्रमित उपचारर रहेका छन् । यसैगरि हेटौंडामा २३८ जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन् । हालसम्म कोरोनाको कारण हेटौंडाका ९ जनाको मृत्यु भएको छ ।
मकवानपुरको ईन्द्रसरोबर गाउँपालिकाका हालसम्म ३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । खबरब्रेक संग कुरा गर्दै ईन्द्रसरोबर गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक मुन्नु नाथ अधिकारीले गाउँपालिकाका हालसम्म ३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताए । उनले ३ जनामा २ जना विदेशबाट आएर स्वाब परीक्षणमा कोरोना पुष्टि भएको र एक जना काठमाण्डौमा उपचारको क्रममा पुष्टि भएको बताए ।
हालसम्म गाउँपालिकाका २ जना संक्रमण मुक्त भईसकेको र एक जना काठमाण्डौमा उपचाररत रहेको बताए । उनले गाउँपालिकामा आइसोलेसनको तयारी भइरहेको पनि बताए । स्वास्थ्य संयोजक अधिकारी अनुसार ५ वेडको आइसोलेसनको तयारी भईरहेको छ ।
उत्तरी मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा हालसम्म २१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । पुष्टि भएका संक्रमितमा हालसम्म १३ जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्कीसकेका छन् भने ८ जना हेटौंडाको गौरीटार आइसोलेसनमा उपचाररत रहेको थाहाका स्वास्थ्य संयोजक मेघराज बलामीले खबरब्रेकलाई बताए ।
उनले थाहा नगरपालिकामा केहि दिनमै २० वेडको आइसोलेसन संचालनमा आउने बताए । उनले आइसोलेसन तयारी अवस्थामा रहेको समेत बताए । उनले थाहामा पुष्टि भएकाहरु बाहिरी देश तथा अन्य जिल्लाबाट आएकाहरुमा मात्र कोरोना पुष्टि भएको बताए । पुष्टि भएर आइसोलेसनमा उपचाररत रहेकाहरुको स्वास्थ्य अवस्था हाल सामान्य रहेको उनको भनाई छ ।
मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकामा हालसम्म ४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।पुष्टि हुनेमा ३ जना गाउँपालिकामै र एक जना भरतपुरमा उपचारको क्रममा पुष्टि भएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक श्याम सुन्दर महतोले खबरब्रेकलाई बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकामा पुष्टि भएका ३ जना हेटौंडाको आफ्न्तको भेटघाटको क्रममा संक्रमण भएको हो । उनिहरु हाल हेटौंडाको गौरीटार आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन् । यसैगरि यहाँ हालसम्म १ जना मात्र संक्रमण मुक्त भएका छन् । गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक महतोका अनुसार गाउँपालिकामा ४० वेडको आइसोलेसनको तयारी भइरहेको छ । आइसोलेसनको लागि भवन निर्माणको कार्य भइरहेको र आवश्यक डाक्टरको लागि सूचना आब्वान गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
पूर्वी मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकामा हालसम्म ७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । पुष्टि हुने ७ जनामा ४ जना संक्रमण मुक्त भइसकेको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक फटिकरमण प्याकुरेलले खबरब्रेकलाई बताए । उनले पुष्टि हुनेमा १ जना बाहिरबाट आएको र बाँकी गाउँपालिकामै पुष्टि भएको बताए । उनले गाउँपालिकामा ३० बेडको आइसोलेसन तयारी अवस्थामा रहेको बताए । गाउँपालिकाको वडा नंबर ४ को महेन्द्र माविको क्वारेन्टिनलाई आइसोलेसन बनाईएको बताए ।
पूर्वी मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकामा हालसम्म ४ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । पुष्टि हुने ४ जनानै बाहिरी देशबाट गाउँपालिकामा आएका र स्वाब परीक्षणको क्रममा पुष्टि भएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक दिनेश गुप्ताले खबरब्रेकलाई बताए । उनले हाल सबैजना संक्रमण मुक्त भइसकेको समेत बताए । स्वास्थ्य संयोजक गुप्ता अनुसार हाल गाउँपालिकामा ५० वेडको क्वारेन्टिन रहेको र गाउँपालिकाले आइसोलेसनको तयारी गरिरहेको छ । उनका अनुसार गाउँपालिकाले ५ वेडको आइसोलेसन संचालनमा ल्याउन लागेको छ ।केहि दिनमै आइसोलेसन संचालनमा आउने उनले दाबी गरे । हाल गाउँपालिकामा स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको उनको भनाई छ ।
मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा हालसम्म १९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । खबरब्रेक संग कुरा गर्दै मकवानपुरगढीका स्वास्थ्य संयोजक बिदुर प्रसाद लामिछानेले हालसम्म गाउँपालिकामा १९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको बताए । उनले पुष्टि भएकामा हालसम्म १३ जना संक्रमण मुक्त भएको समेत बताए । बाँकी ६ जना होम आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन् ।
पुष्टि भएकाहरु सबै स्थानीय समुदायका रहेको बताइएको छ ।
स्वास्थ्य संयोजक लामिछानेले गाउँपालिकामा आइसोलेसनको तयारी भइरहेको बताए । उनका अनुसार केहि दिनमै संचालनमा आउने आइसोलेसन २० वेडको रहने बताए । उनले भवन निमार्ण कार्य केहिदिनमै सकिने र संचालनमा ल्याईने बताए ।
मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकामा हालसम्म २७ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । खबरब्रेक संग कुरा गदै गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक राम नाथ थिङले हालसम्म २७ जनामा कोरोना पुष्टि भएकोमा १८ जना निको भएको बताए। उनले पुष्टि भएकोमा ७ जना आर्मी क्याम्पमा उपचाररत रहेको र २ जना होम आइसोलेसनमा रहेको बताए । उनले गाउँपालिकामा १० वेडको आइसोलेसन तयारी रहेको बताए । उनले कोरोना पुष्टि हुनेमा करिब दुई दर्जन स्थानीय स्तरमै पुष्टि भएको र बाँकी बाहिरबाट आएकोमा पुष्टि भएको बताए ।
मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकामा हालसम्म १३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । खबरब्रेक संग कुरा गदै गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक विजय कुमार कापरीले हालसम्म गाउँपालिकामा १३ जना पुष्टि भएको बताए । उनले पुष्टि भएकामा हालसम्म २ जना मात्र संक्रमण मुक्त भएको बताए । पुष्टि भएकाहरुमा ६ जना गाउँपालिका स्थित आफ्नै घरमा होम आइसोलेसनमा,४ जना मनहरी स्थित आइसोलेसनमा र १ जना काठमाण्डौको एक अस्पतालमा उपचाररत रहेका छन् । उनले गाउँपालिकामा आइसोलेसनको तयारी भइरहेको समेत बताए । उनले हालको क्वारेन्टिनलाई आइसोलेसनको रुपमा प्रयोग गरिने उनले बताए । आइसोलेसन २५ वेडको क्षमता रहने बताईएको छ ।
मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकामा हालसम्म ६४ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । खबरब्रेक संग कुरा गर्दै गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक टिकाराम अधिकारी हालसम्म ६४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको बताए । उनले आज मात्रै गाउँपालिकामा थप २५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको बताए । उनले पुष्टि हुने सबै स्थानीय स्तरमै संक्रमण भएको बताए । उनले मनहरीमा भएको आइसोलेसनको क्षमता २४ वेडको रहेको बताए । उनले संक्रमितको लागि उपचारको लागि आइसोलेसको क्षमता बढाउनको लागि छलफल भइरहेको समेत बताए । उनका अनुसार मनहरीमा हालसम्म २४ जना संक्रमित संक्रमण मुक्त भएका छन् । यो संगै मनहरीमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ४० रहेको उनको भनाई रहेको छ । सोमबार मात्रै मनहरीमा कोरोना संक्रमणको कारण एक जनाको मृत्यु भएको थियो । उनको मृत्यु पछि स्वाब परीक्षणमा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।